Siyaasad aan sal-fadhisa iyo mabda’ sugan lahayn | KEYDMEDIA ENGLISH
Xoguhu, waxa ay tilmaamayaan in ku dhawaad hal malyan oo dollar, ay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin faraqa ugu shubeen Buur-madow, kaas oo laga doonayo inuu soo saaro Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, oo cadaadis kala kulmaya xaafiiska RW Rooble.
MUQDISO, Soomaaliya – Dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliya, gaar ahaah shaqsiyaadka hadda hoggaanka u haya siyaasadda ayaa noqday kuwa aan sal-fadhiya iyo mabda’ siyaasadeed lahayn, waxaadna arkeysaa guur-guur badan iyo hadba geed fariisi, ku dhisan daneysi shaqsiyadeed.
Wax ka yar 140 cisho, ayaa ka soo wareegtay, markii gacanta la isku saaray Guddoomiyahii hore ee Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo RW ku-xigenka Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), kuwaas oo muddo ka laba daraf oo iska soo hor jeeda kala hoggaaminayay.
Hayeeshee, danaha shaqsiyaseed ee labada siyaasi ayaa sababay in mid kasta baddelo aaggiisii hore, tusaale ahaan, Cabdi Xaashi, wuxuu si adag kaga soo hor horjeeday Farmaajo, haddana wuxuu u bira-tumayaa in kuraas loo boobo isaga, Mahadi, wuxuu afar sano iyo bar ahaa adeego idman oo Farmaajo ku daaban, haddese danaha gaarka ah ayaa albaabkaas ooday.
Maanta Siyaasiyiin uu hoggaaminayay Cabdi Xaashi, oo boqor Buur-madow, Prof Samatar iyo kuwo kale oo caan ah ka soo dhex muuqdeen, ayaa si adag u canbaareeyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya, halka kuwo kale, oo uu hor-kacayo Mahdi Guuleed, ay caawa Caasimadda ku qabsadeen kulan ay ku taageerayaan RW Rooble.
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, kala aragti duwanaantaan, ayaa timid, kadib wada-hadallo dhex maray, Farmaajo iyo Boqor Buur-madow, kaas oo labada dhinac isku af-garteen in la soo saaro shaqsiyaad Farmaajo iyo Fahad Yaasiin doonayaan.
Sidoo kale, Cabdi Xaashi, ayaa doonaya in la soo saaro shaqsi magaciisa lagu sheegay Mukhtaar oo ah madaxa Maaliyadda hay’adda Nabad-sugidda kaas oo uu gadaal ka taagan yahay agaasimihii hore ee NISA eedeysane Fahad Yaasiin.
Buur-madow, Xaashi iyo Samatar, waxa ay sidoo kale doonayaan in meesha laga saaro qeyb hore u jirtay [qeybta beelaha] isla-markaana sideeda looga leexdo kuraas sad-bursi hore uga jiray oo ay hadda dhankooda u rabaan.
Garabka Mahdi Guuleed, waxa ay doonayaan in dib loo saxo qaladad hore u jiray, uu oo ka mid yahay kursiga uu sheegto inuu saxixihiisa yahay Buurmadow, kaas oo hadda lagu qoray saxiixe cusub, halka ay damacooda kula daaranayaan RW Rooble, oo dhankiisa doonaya in hor istaago shaqsiyaadka Fahad iyo Farmaajo wadaan.
Mabda’a aan fadhin in hadba meel u guurka ayaa caan ka ah siyaasadda Soomaaliya dhexdeeda, waana wax fudud is aad aragto shaqsiyaad shalay dano shaqsiyadeed u kala go’ay maansate kuwo u gaar ah mideeyeen, kuma sii jiraan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi, oo Koofurta u jooga maalin-joog iyo iska-daba-wareeg.